Madaxweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo lagu wado in maalinta bari u qaliin ku maro dalka Koofur Africa – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo lagu wado in maalinta bari u qaliin ku maro dalka Koofur Africa
Madaxweynihi hore ee dalka ee hadda hawlgabka ka noqday siyaasada Mwai Kibaki ayaa lagu wada in maalinta bari qaliin lagu sameeyo si looga saaro xinjir dhiig ah oo kujirta xidid qoorta kaga yaala Sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku agdhaw madaxweynihi hore ee dalka si dhawna u la socda xaladiisa caafimaad.
Dhaqaatirta isbitaalka madaxweynihi hore ee dalka u ku jiro Mwai Kibaki ee Netcare Sunninghill ee kuyaala magaalada Johannesburg ayaa waxa lagu soo waramaya in ay waqti fiican arkeen xinjirtaan waxana ay sheegen in ay xinjirtan madaxweynihi hore ee dalka ay kaga jirtay meel wanaagsan oo jirkiisa kamid ah taas oo qaliin lagu sameeyn karo.
Sida ay sheegen ilo waredyo ka agdhaw Mr Mwai Kibaki xalada caafimaad ee madaxweynihi hore ee dalka ayaa hadda ah mid aad ugu wanaagsan kana wanaagsan mida u ku sugnaa marka dalka laga soo qadaayay waxana ay intaas ku dareen in u hadda yahay qof soconi kara.
Si kastaba ha ahaate Mr Kibaki oo 84 sano jir ah ayaa maalinta shalay waxa ay ahayd maalintiisa 3-aad ee u ku qaato isbitaal kuyaala waddanka Koofur Africa.
Wallow ay soo baxen wararka sheegaya in Mr Kibaki maalinta barito qaliin u mari doono saraakiisha sar sare ee dawladda iyo xubnaha qoyskiisa ayaa ka gaabsaday in ay wax faah faahin ah ka bixiyaan xalada caafimaad ee madaxweynihi hore ee dalka.
Mr Kibaki ayaa waxa habeenimada sabtida la soo dersay xanuun isago loola cararay isbitaal kuyaala xafada Karen iyado ugu dambeyna loo duliyay waddanka Koofur Africa maalinta axada ahayd si u halkaas uga helo daryeel caafimaad waxana diyaarada siday ay ka kacday garoonka diyaradaha ee Wilson Airport.
← Madaxweyne kuxigeenka oo ugu baaqay dadaka Kenyanka ah in ay tageeran Jubilee
Askariyad ka tirsan booliska oo isku dishay garoonka diyaaradaha →
1 thought on “Madaxweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo lagu wado in maalinta bari u qaliin ku maro dalka Koofur Africa”